Kedu ihe Google Analytics Bounce Rates? - Ihe nmalite na-enye azịza ya
Ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ịma mmadụ ole na ole na-aga na saịtị ha kwa ụbọchị iji chọpụta ọrụ ha. Otu n'ime metrics a na-eji tụọ percentages ndị a bụ ọnụego bounce nke na-edekọ ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na ala ahụ ma ghara ime ihe ọ bụla na ya.
Ọrụ dị otú ahụ nke ndị ọbịa na-eme adịghị eme ka mmeghachi omume ọ bụla sitere nchịkọta Google. Jack Miller, Semalt Onye na-ahụ maka ndị ahịa na-ahụ maka ndị ahịa, na-akọwa na ọnụego ụtụ na-enyere ndị nwe ụlọ weebụ aka ịchọpụta ihu ọma nke ibe ma ọ bụ ndị na-ege ha ntị. Ihe ndị na-ege ntị na-ezo aka ma saịtị ọ dabara na nzube ya.
Nchịkọta Ụgwọ Ụgha nke Google Analytics
Google na-agbakọọ ọnụego ụba site na ịkewa otu nnọkọ peeji nke site na nnọkọ niile - q-net queue management system.
Inwe oke ego mgbagwoju anya maka weebụsaịtị ma o bu akwukwo nwere ike inwe ihe obula ato:
Ụdị nke ibe ahụ dị n'okpuru.
Ndị a na-elekwasị anya bụ ndị na-ezighị ezi n'ihi ọdịnaya ndị dị na saịtị ahụ.
Ihe ọmụma dị na peeji ahụ kpọmkwem ezuola.
Bounce Rate na SEO
Enweela arụmụka dị ukwuu ma ọ bụrụ na engines ọchụchọ na-eji ọnụ ụba akwụ ụgwọ dị ka ihe dị elu. O siri ike iche na Google na-ewepụta data site nchịkọta Google iji jiri ya mgbe ị na-ahụ weebụsaịtị. Ihe kpatara echiche a bụ na ọ bụrụ na onye nwe ya anaghị emejuputa AG n'ụzọ ziri ezi, mgbe ahụ, ozi ahụ enweghị ntụkwasị obi. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị mfe ịhazi ọnụego bouncer. Ọ dị mkpa ijide n'aka na ndị mmadụ na-abanye na saịtị site na search engine . Ụdị bouncing nwere ike ịbụ ihe dị mkpa, ma ọ bụghị otú anyị si ahụ ya na GA.
Ịkọwapụta Ụgwọ Bounce
Ọ bụrụ na ebumnuche nke saịtị ahụ bụ ịkọwa, ọnụego nnukwu ọnụahịa abụghị ihe ọjọọ. Ndị ọkachamara na-enye ndị nwe ụlọ ndụmọdụ ka ha kee ngalaba nke na-agụnye ndị ọbịa ọhụrụ. ndị nleta bụ ihe ọ bụla iji mee ka njikọ ahụ dịkwuo mma na saịtị ahụ.
Ọ bụrụ na peeji nke a bụ ịbanye na ndị ọbịa, mgbe ahụ mmụba na ọnụego ụba abaghị uru maka azụmahịa. Ịchọta peeji nke a bụ otu n'ime ụzọ iji dozie mmezigharị a. E nwere ihe ndị ọzọ na-akpata ọnụ ọgụgụ dị elu nke mgbagwoju anya, ma n'elu nke ha bụ mgbasa ozi ụgha. Ọ bụrụ na nkọwa ahụ adabaghị na ọdịnaya, ndị ọbịa ga-atụgharị na ibe. Ọ bụrụ na onye ọ bụla doro anya banyere ọrụ saịtị ahụ, ọnụọgụ ego ọnụ ala bụ ihe ngosi nke àgwà ndị na-ege ntị.
Ọganihu ịba ụba nke ọma, na mmụba ga-enyere onye nwe ụlọ aka ịgbanwe àgwà ahụ ka ọ dị mma ka ị gbanwee. Ọzọkwa, ihe eji eme njem nwere ike inyere aka n'ịchọpụta ihe mere ọtụtụ mmadụ ji na-akwụ ụgwọ. Akwụkwọ akụkọ, ebe nrụọrụ weebụ Ntuziaka, na AdWords nwere ike inye aka mee ka ọnụ ọgụgụ dị elu. Ilegide anya na nke a nwere ike inyere aka belata nsogbu ahụ ma melite ọnụego ndị na - agbanwe agbanwe.
Nlezianya mgbe ị na - eme mkpebi
Ọnụ ọgụgụ a na-akwụchaghị ụgwọ ọnụ ala bụ ihe ka ukwuu n'ime ihe na-ezigara na-apụta na GA pụtara na ọ nwere mmejuputa mmejọ. Ha nwere ike ịbụ mmapụta ma ọ bụ vidiyo na vidiyo nke onye nwe. Inwe ọnụ ala dị ala na ihe ndị na-eleba anya na ị gụgharị akwụkwọ akụkọ bụ ihe dị mma.
Ịkụnye Ụgwọ Bounce
Nanị ụzọ ị ga esi eme nke a bụ ịmepụta njikọ aka na saịtị ọdịda. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke mgbagwoju anya site n'aka onye ọ bụla ga-eduga onye nwe ya iji hụ ma nyochaa ihe ndị na-atụ anya nleta na ndị ọbịa dị na ya. Ọ bụrụ na atụmanya ndị ahụ dị mma, ma ị ka nwere ọnụego mgbazinye dị elu, mgbe ahụ, ọhụụ zuru ezu dị nso.
Ụfọdụ ndị mehiere ọnụego na ọnụ ụzọ ọpụpụ. Ọnụ ọpụpụ na-ezo aka na njedebe ikpeazụ nke onye ọrụ na ihe kpatara ha ji kwụsị ya na ibe ahụ
Ọnụ ego bounce kwesịrị inyere aka ịchọpụta ma saịtị ahụ ọ na-agbaso ihe ndị na-atụ anya ya. Ọzọkwa, ha kwesịrị inyere aka n'ịmepụta ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị maka ndị ọrụ.